Si loogu badalo MP4 in 3GP u waafaqsan badan oo ku saabsan telefoonada gacanta ee kala duwan, MP4 xirfadle in Converter 3GP waa lagama maarmaan.
Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in lagu wareejiyo filimada MP4 in telefoonnada gacanta u madadaalo ah oo ku saabsan go ka. Laakiin somtimes files MP4 ma noqon kartaa mid taageero casriga ah. Halkan waxa aad u baahan tahay si loogu badalo MP4 in 3GP, waayo, 3GP waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in telefoonada gacanta. Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa MP4 xirfadle in Converter 3GP in ay si fudud u xaliyaan dhibaatadaada.
Qeybta 1: Best MP4 in 3GP Converter for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Qeybta 2: MP4 Free in 3GP Converter
Qeybta 3: MP4 Online in 3GP Converter
Qeybta 1: Best MP4 in 3GP Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan MP4 in 3GP, MKV, AVI, iyo xataa 3D iyo HD videos aan wax dadaal ah.
• Presets ee telefoonada Apple oo Android, sida iPhone, Samsung, HTC, LG iyo in ka badan.
• Gubashada MP4 ama 3GP ama qaabab kale si DVD disk xawaare aad u dheereeya.
• Ku dar metadata (cover, sharaxaad, comment, actor, iwm) si macmal ah oo lagala soo bixi videos.
Sida loo badalo MP4 in 3GP
Akhri tilmaamaha hoos ku saabsan sida loo badalo MP4 in 3GP in Windows (Windows 10 ka mid ah). Dadka isticmaala Mac, halkan ka heli tutorial ah, Sida loo Beddelaan MP4 in 3GP ee Mac .
Tallaabada 1 dar files MP4 in MP4 in ay Converter 3GP
Guji ka button xitaa your computer disk adag, ka dibna dooran files MP4 inay dajiyaan. Haddii kale, si toos ah jiidi videos MP4 ka kombiyuutarka in barnaamijkan.
Tallaabada 2 Dooro qaab wax soo saarka sida ay telefoonka
MP4 Tani Converter in qalab 3GP ururiya daydo mobile dhow oo dhan oo caan phone in ay liiska qaabka wax soo saarka, sida Samsung, taxane HTC, Motorola, Nokia, Blackberry, Sony iwm Just ka dhacay icon Qaabka ka dibna dooro qaabka ugu fiican ee wax soo saarka si waafaqsan model phone u gaar ah. (Ikhtiyaar 3GP waxaa laga heli karaa version Mac of Converter MP4 si qalab 3GP).
Fiiro gaar ah: Haddii aad ka heli file MP4 yahay waaweyn ee size oo aad rabto inaad googooyeen clips yar-size, waxa kale oo aad isticmaali kartaa in ay gundhig u shaqeeyaan si ay u dhinto falinjeeerka aad video files.
3. U beddelaan MP4 in 3GP
Guji "Beddelaan" si ay u bilaabaan diinta MP4 in 3GP. Waxaad arki doonaa files MP4 yihiin diinta qaab 3GP. Ka dib markii in, riix muuqday "Folder Open" fursad u heli faylasha la gediyay. Hadda, aad nuqul karo files wax soo saarka si aad telefoonada gacanta. Waxaad ka heli doontaa qalab aad ku garan karto oo kuu ogolaanaya in aad iyaga u ciyaaro si habsami leh.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan MP4 in 3GP for Windows (Windows 10 ka mid ah)
# 1. Free Video Converter: Wondershare MP4 Free in 3GP Converter
Wondershare MP4 Free in Converter 3GP kuu ogolaanaysaa inaad badalo MP4 in 3GP gebi ahaanba bilaash ah, xitaa waxa aad qaadi karto si aad xaalkaa videos download iyo videos goobta YouTube.
Pro: freeware nadiif ah
1. Qaabab saarka ayaa ku eg tahay wax caadi ah videos. Waxaad ku isticmaali karin si loogu badalo in ay 3D iyo HD videos.
2. Waxaa jira presets u telefoonada gacanta, FCP iyo iMovie, iwm
3. Waxaad ma isticmaali karaan si ay u gubaan video inay DVD.
Haddii aad daryeel badan oo ku saabsan wax soo saarka 3GP video oo tayo leh, oo aad doonayso si aad u hesho a video Converter boosaska badan, kaliya isku day Video Converter Ultimate hoos ku qoran.
Top 5 FLV Free in 3GP converters
3GP DVD: Sida loo Guba 3GP in DVD
Sidee ku cadaadisaa MP4 (MPEG / Mpg) Video
Sidee ku cadaadisaa MOV Files (Quicktime)
Sida loo Beddelaan Video_TS in AVI
Sida loo Beddelaan MP4 in iPad u Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Sida loo Play MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah?
Sida loo dar metadata MP4 for Windows / Mac (Mavericks ka mid ah)
Sidee baan Edit Karaa MP4 la Adobe jilitaankii by Siyaabo kala duwan
MKV vs MP4, Faraqa u dhexeeya MKV iyo MP4
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in 3GP